India Archives - 24 News Press
पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणबाट भारतमा दुई नेपालीको मृत्यु
पुष ११ – भारतीय सेनाको सुवेदार पदमा कार्यरत दुई नेपालीहरु पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणमा मारिएका छन् ।रुपन्देहीको...
भारतको बंलोरमा आगलागीमा परी बझाङका २ बालबालिकाको मृत्यु
बझाङ्ग । भारतको बंलोरमा आगलागीमा परी बझाङका २ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार बिहान ११ बजे एक्कासी कोठाम...
काठमाडौं । दिल्ली महिला आयोग (डिसीडब्लु) ले ३९ जना नेपाली महिलालाई एक होटलबाट मङ्गलबार राति उद्धार गरेक...
भारतको तनाव बढ्यो, चीनसँग नजिकिँदै भुटान
प्रोफेसर अलका आचार्य सेन्टर फर इस्ट- एसियन स्टडिज,जेएनयू बीबीसी। २२–२४ जुलाईकोबीच चीनका उपविदेशमन्त्री कोङ सुव...
२४ वर्षपछि भारतीय कागारागारबाट फर्किए गणेश
राजेन्द्र पनेरु, कञ्चनपुर । युवा अवस्थामै कमाउनका लागि भारत पुगेका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ सिसैयाका ५५ वर्षीय...
बाबुले दाइजो पठाएको सुटकेसमा छोरीको शव भेटिएपछि…
मुम्बई । भारतको इन्दिरापुरम क्षेत्रस्थित कनावली केएक नालामा प्रहरीले सुटकेशमा बन्द गरेको फ्याकिएको अवस्थामा एक...
हरिणको शिकार गरेको आरोपमा सलमान खान दोषी ठहर, ६ वर्ष जेल सजाय हुने
काठमाडौँ । कालो हरिणको शिकार गरेको आरोपमा बलिउड अभिनेता सलमान खान दोषी ठहर भएका छन् । जोधपुरको एक अदालतले १९ व...
Posted By: 24 News Presson: December 26, 2018
पुष ११ – भारतीय सेनाको सुवेदार पदमा कार्यरत दुई नेपालीहरु पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणमा मारिएका छन् ।रुपन्देहीको तिलोत्तमा-९, तुलसीपुरका सुवेदारद्वय गमरबहादुर थापा र रमन थापाको भारतको कुपवाडा जिल्लामा परेको आक्रमणमा मृत्यु भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ ।
शुक्रबार पाकिस्तानको स्नाइपर आक्रमणमा परेका थापाद्वयको निधन श्रीनगरस्थित ९२ बेस अस्पतालमा लैजाने क्रममा भएको हो । ४२ वर्षीय गमरबहादुर सन् १९९३ मा २/८ गोर्खा राइफल्समा भर्ती भएका थिए । उनका पत्नी र दुई छोरा छन् ।त्यस्तै, ३९ वर्षीय रमन सन् १९९६ मा भर्ती भएका थिए । रमनका सात वर्षीय एक छोरा छन् ।भारतीय सञ्चार माध्यमले पाकिस्तानले युद्धविराम भंग गर्दै हमला गरेको जनाएका छन् ।
बझाङ्ग । भारतको बंलोरमा आगलागीमा परी बझाङका २ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्।
आइतबार बिहान ११ बजे एक्कासी कोठामा आगलागीबाट मृत्यु हुनेमा मष्टा गाउँपालिका ७ साविकको रिलु गाविस १ बस्ने देविन्द्र जेठाराका ५ वर्षीय छोरा सर्जन जेठारा र दुई वर्षिया छोरी लक्ष्मी जेठाराको मृत्यु भएको हो।
मृतकका आफन्त कमल जोशीका अनुसार कोठामा एक्कासी आगलागी हुँदा ती बालबालिकाको मृत्यु भएको हो।
काठमाडौं । दिल्ली महिला आयोग (डिसीडब्लु) ले ३९ जना नेपाली महिलालाई एक होटलबाट मङ्गलबार राति उद्धार गरेको छ । नेपालबाट त्यहाँ पु¥याइएका ती महिलालाई दिल्लीको पहाडगञ्ज क्षेत्रमा रहेको एक होटेलमा राखिएको थियो ।
प्रोफेसर अलका आचार्य
सेन्टर फर इस्ट- एसियन स्टडिज,जेएनयू
बीबीसी। २२–२४ जुलाईकोबीच चीनका उपविदेशमन्त्री कोङ सुवानयुले भुटानको दिन दिवशीय भ्रमण गरे। दोक्लाममा गत वर्ष अगस्टमा भारत र चीनको सेनाको ७३ दिनसम्म चलेको विवाद समाप्त भएपछि चीन भुटानबीच सिधा सम्पर्क भएको यो पहिलो पटक हो।
चीन र भुटानबीच कुनै औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध छैन। यही कारण चीनको विदेश मन्त्रलायको वेबसाइटमा उल्लेख भएको एसियाली देशमा भुटानको नाम समावेश गरिएको छैन्। तर बेला बेलामा चीनका अधिकारीले भुटानको भ्रमण गर्ने गरेका छन्। र, चीनका नयाँ दिल्लीस्थित राजदूत भुटानी राजदूतसँग नियमित आधिकारिक छलफल पनि गर्छन्।
अहिलेको भ्रमणमा अधिकांश रिपोर्टमा के कुरा उल्लेख छ भने कुटनीतिमा वरियातालाई लिएर प्रोटोकलमा थोरै परिवर्तन गरिएको छ र, कोङको औपचारिक बैठकलाई सर्वोच्च सम्मान दिइएको छ। चीनका उपविदेश मन्त्री कोङले भुटानका राजा र पूर्व राजासँग बैठक गरे। अनि प्रधानमन्त्री सेरिङ तोबगेसँगै विदेश मन्त्री दामचो दोर्जीसँग पनि भेटवार्ता गरे।
दुवै देशले आफ्नो सीमा विवाद सुल्झाउनकालागि गम्भीर छलफल गरेको र सीमा विवाद अन्त्य गर्ने सहमति भएको आधिकारिक रुपमा बताइएको छ। सीमालाई लिएर दुवै देशबीच समान धारणा बनाइएको छ। तर समान धारणाका विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन्।
चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै देशका सीमा जोडिएको इलाकामा शान्ति बनाइ राख्ने र सीमा विवाद अन्त्य गर्न सकारात्मक परिस्थिति पैदा गर्न दुवै पक्ष अगाडि पनि सर्वसम्मतिबाट सीमाका विषयमा छलफल गर्दै जानुपर्छ।’
ब्रिटिसको समयदेखि नै भुटानीलाई उसको विदेश सम्बन्धलाई सधैं भारतले नै गाइड गर्दै आएको छ। वास्तवमा भुटान अहिले पनि पूरै भारतमा निर्भर छ। यद्यपी दोकलाम घटना निन्द्राबाट ब्यूँझिने संकेत हो।
भुटानी समाचारपत्रले दुवै देशबीच के विषयमा छलफल भयो भन्ने नखुलाइ भेटवार्ता मात्र भएको समाचार सम्प्रेशण गरेका छन्। ऐतिहासिक रुपबाट भुटान र चीनबीच बलियो सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध छ। तर ब्रिटिसको समयदेखि नै भुटानीलाई उसको विदेश सम्बन्धलाई सधैं भारतले नै गाइड गर्दै आएको छ। वास्तवमा भुटान अहिले पनि पूरै भारतमा निर्भर छ। यद्यपी दोकलाम घटना निन्द्राबाट ब्यूँझिने संकेत हो।
भुटान दुई शक्तिशाली देशबीच गोलीबारीबीच आफ्नोमा रगत बगेको देख्न चाहँदैन। मुख्य प्रश्न के हो भने चीनसँग आफ्नो सीमालाई लिएर भुटान कहिलेसम्म नियन्त्रित भइरहन्छ र भारतको सामरिक आवश्यकतालाई कहिलेसम्म चुपचाप स्वीकार गरिहन्छ?
दोकलाम चीनकालागि आवश्यक छ। किनभने यो ठाउँ सामरिक कमजोरीले तीनतिरबाट घेरिएको छ। उता भारतकालागि पनि यो स्थिति सिलगुढी करिडोरमा स्थित चिकन नेकमा छ। जहाँ चीन अस्वीकार्य लाभको स्थितिमा छ। यो भारतलाई पूर्वोत्तर भारतसँग जोड्ने भूभाग हो।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने २०१७ मा दोकलाम विवादका क्रममा भुटानबाट पनि केही यस्ता आवाज उठेका थिए जसमा दोकलामलाई लिएर भारतको सामरिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने विषयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
त्यसपछि चीनले जब भुटानसँग आफ्नो वार्षिक छलफल रद्द गर्यो तब पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका थिए। अहिले दोकलामको महत्वलाई लिएर भारत र भुटानबीच स्पष्ट असहमति भएको कुरा कसैबाट पनि लुकेको छैन्।
खासगरी चीनसँग सीमा विवाद हल गर्न भुटान माथि आन्तरिक दबाव बढिरहेको छ। युवा पिढी सामाजिक संजालमा चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा रणनीतिक समझदारीलाई लिएर प्रश्न गर्ने गरेका छन्।
भुटानको चारवटा सीमा क्षेत्रमा चीनको आक्रमण र ठूला संरचना निर्माणका विषयमा जनस्तरबाट व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यही भएर पनि भुटान चीनसँगको सीमा विवाद सल्टाउन चाहन्छ। भुटान यतिबेला चुनावतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर भुटानको घरेलु राजनीतिमा चीनसँगको सीमा विवादलाई पनि मुद्दा बनाइने संभावना छ।
चिनियाँ उपविदेशमन्त्री कोङको भुटान भ्रमण निश्चित रुपले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा परिवर्तनको संकेत हो। खासगरी दोकलामको घटना र तीनै देशमा परेको त्यसको प्रभावका विषयमा।
यद्यपी भारत र चीनबीच सहमति भएपछि दुवै पक्षका सेना पछि हेटेका छन् भने त्यहाँ कुनै पनि संरचनाको निर्माण नहुने सहमति भएको छ। अहिले चीनका मेशिन र मजदुर फिर्ता भइसकेका छन्।
चीनले पहिलाको तुलनामा दोकलामको झन ठूलो इलाकामा आफ्नो कब्जा जमाएको छ। प्रभावशाली रुपबाट चीनसँग सीमा विवादको विषयमाथिको छलफलमा भुटानले लाभ पाउने स्थिति कम भएको छ। प्रश्न के होभने भुटानी अधिकारी र सीमावती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई के सन्देश गइरहेको छ? दोकलाम विवादपछि यसलाई लिएर कुनै संन्देह छैन की चीनको सडक निर्माण गतिविधिका कारण पश्चिमी भुटानमा सामान्य परिवर्तन बाहेक वर्तमान स्थितिबाट पछि हट्ने छैन्।
एउटा सानो दक्षिण एसियाली मुलुकको इन्जिनको रुपमा चीन भारतको छिमेकमा आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको छ। अन्तिममा, भारत दक्षिण एसियाको एकमात्र यस्तो देश हो जसले चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिनपिङको महत्वकाँक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाको खुलेर विरोध गरिरहेको छ। भारतको विरोधले चीन पक्कै पनि रिसाएको छ। र उनले यसलाई प्रभावशाली तरिकाले जनाउ पनि दिइसकेको छ।
दोकलाम बनाउँदै गरिएको सडक त्यस्तै प्रकारको विकासको ढाँचा हो जसलाई बीआरआईसँग जोड दिएको छ। चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार कोङको भुटान भ्रमणका क्रममा भुटानले चीनको विकास उपलब्धिको प्रसंसा गर्नुका साथै राष्ट्रपति शि जिनपिङले अगाडि बढाएको वन बेल्ड, वन रोड परियोजनाको स्वागत गरेको उल्लेख छ।
त्यस बाहेक भुटानले विश्व शान्ति,समृद्धि र विकासलाई अगाडि बढाउन चीनको योगदानको पनि सराहना गरेको छ। भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चीनको ठूलो भूमिका निभाएको भन्दै स्वागत पनि गरेको छ।
राजेन्द्र पनेरु, कञ्चनपुर । युवा अवस्थामै कमाउनका लागि भारत पुगेका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ सिसैयाका ५५ वर्षीय गणेश ऐरले आधा जीवन जेलमा बस्नु पर्ला भनेर सपनामा समेत चिताएका थिएनन् । कमाउनका लागि भारततर्फ जाने बेला रु चार हजार मूल्यबराबरका क्यामेरा, क्यामेराको रिल, टेपरेकर्डर र आवश्यक कपडा बोकेर निस्कनु भएका उनलाई त्यही सामानले भारतमा २४ वर्ष जेल जीवन बिताउन बाध्य बनायो ।
पञ्जाव प्रान्तको जालन्धर नाकामा भारतीय प्रहरीले जाँच गर्दा झोलामा ती सामान फेला पारेपछि तस्करीको आरोपमा उनलाई जालन्धरको कपुरथला सेन्टर कारागारमा पुर्याइयो र उनले पूरै युवा उमेर सोही कारागारमा बिताए । कारागारबाट छुट्नका लागि वकिलको व्यवस्था गर्न नसक्दा र आफन्तले खोजखबर नपाउँदा लामो समय कारागार बस्नु परेको ऐरले बताए ।
कारागारमा रहँदा दुई छाक खानबाहेक अन्य सुविधा दिइएको थिएन उनले भने, “ कारागारमा कैदीका लागि खाना पकाउने र कपडा सफा गर्ने कार्यमा लगाइन्थ्यो तर अन्य कैदीसरह दैनिक दिइने पैसा समेत दिने गरिएको थिएन ।” कमाउने पूरै उमेर कारागारमा बिताएपछि छ महिनाअघि उनलाई रिहाइ गरिएको हो ।
रिहाइ भएपछि काठ बोक्ने ट्र्याक्टरमा काम गर्न थालेँ । सोही क्रममा नेपालीसँग भेट भयो । मैले तपार्इंहरु नेपाली हो भनेर सोधेँ उनले भने, “उनीहरुले नेपाली भएको बताएपछि आफ्नो सबै कथा व्यथा सुनाएँ ।
उनीहरुले फेसबुकमा मेरो फोटो र अवस्थाबारे लेखेर नेपालमा रहेका आफन्तलाई पठाए । छोराहरुले जानकारी पाएपछि खोज्दै भारत पुगेर भेटी घरमा ल्याए ।” सोमबारमात्रै उनी घरमा पुगेका थिए। जेठो छोरा आठ वर्ष र कान्छो छोरा डेढ वर्षको छँदा उनी भारततर्फ लागेका थिए । श्रीमतीले छोराले फेसबुकमा देखाइएका बुबा नै भएको बताएपछि उनीहरु चार दिनका लागि भारत जाँदै छौँ भनेर गएका गणेशकी श्रीमती ईश्वरीदेवीले भनिन्, “धेरै ठाउँमा खोजतलास गर्दासमेत भेटाउन सकेका थिएनौँ ।”
“यहाँबाट भारत जाने क्रममै भारतीय प्रहरीले तस्करीको आरोप लगाएर कारागार पुर्याएछन् । पूरै जीवन कारागारमा काटे पनि मर्ने बेला भेट्न पाउँदा निकै खुसी छौँ”, उनले बताए । भारतका धेरै ठाउँमा खोजतलास गर्दासमेत नभेटेपछि कुसको मूर्ति बनाएर किरिया गर्ने भनेर आफन्तमा कुरा चल्दै थियो भतिजा रमेशबहादुर ऐरले भने, “भेटिएपछि खुसीको सीमा नै रहेन ।”
वर्षौंअघि हराएका उनी भेटिएपछि गाउँका सबै बासिन्दामा खुशियाली छाएको छ । गाउँका सबैजना भेट्न उनको घरमा जम्मा हुन थालेका छन् । कारागार पर्नुअघि र परेपछिको कुरा भेट्न आउने सबैलाई गणेशले बिनाहिचकिचाहट सुनाउने गरेका छन् ।
Posted By: 24 News Presson: April 12, 2018
मुम्बई । भारतको इन्दिरापुरम क्षेत्रस्थित कनावली केएक नालामा प्रहरीले सुटकेशमा बन्द गरेको फ्याकिएको अवस्थामा एक महिलाको शब भेटको छ । दाईजोको निहुँमा साथीसँग मिलेर पति शिवम्ले पत्नी मालाको हत्या गरेको इन्दिरापुरमका प्रहरी अधिकारी धमेन्द्र चौहानले बताए ।
मृतक २४ वर्षीय माला शनिबारदेखि हराएकी थिइन् र मंगलबार सुटकेसमा कोचेर फालिएको अवस्थामा नालीमा मृत भेटिएकी थिइन् । धम्रेन्द्रका अनुसार मालाको घाँटी रेटिएको र हातखुट्टा बाँधेर सुटकेसमा कोचेको पाइएको थियो ।
जुन सुटकेसमा मालाको शव भेटियो त्यही सुटकेशमा मालाका बाबुले दाइजो दिएका थिए । यद्यपी कम दाइजो दिएको भन्दै मालालाई पतिले यातना दिँदै आएको समाचारमा जनाइएको छ ।
सन् २०१६ मा फेसबुकमार्फत चिनापर्ची भएका उनीहरुबीच केहि पछि विवाह भएको बताइएको छ । परिवारका अनुसार माला ५ महिनाकी गर्भवती समेत थिइन् ।
Posted By: 24 News Presson: April 05, 2018
काठमाडौँ । कालो हरिणको शिकार गरेको आरोपमा बलिउड अभिनेता सलमान खान दोषी ठहर भएका छन् । जोधपुरको एक अदालतले १९ वर्ष पुरानो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै चलचित्र अभिनेता खानलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सरकारी वकिलले ६ वर्षको कैद सजाय माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा मुछिएका अभिनेता सैफ अलि खान, अभिनेत्री सोनाली बेन्दे्र, निलम, तब्बू लगायत भने निर्दोष ठहर भएका छन् । चलचित्रको छायांकनका क्रममा राजस्थानको जोधपुर पुगेका कलाकारको टोलीले कालो हरिणको शिकार गरेका थिए । मुद्दाको सुनुवाईका लागि सलमान खान, सैफ अलि खान, निलम लगायत जोधपुरमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यो घटना चलचित्र ‘हम साथ साथ हे’ को सुटिङको दौरानमा घटेको थियो । सन् १९९८ मा राजश्री फिल्मको ब्यानरमा बनेको यस चलचित्रको सुटिङको समयमा सलमान खानले कालो हरिण मारेको आरोप लागेको छ । साथै सलमानलाई उक्साउन सहयोग गरेको आरोपमा सैफ अली खानसहितका अन्य कलाकारको नाम पनि समावेश छ । सलमान खानलाई वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको धारा ५१ त्था अन्य कलाकारलाई वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको धारा ५१ त्था भारतीय दण्ड सहिंताको धारा १ सय ४२ अन्तरगत मुद्दा चलाइएको छ ।
वीग बीकाे पत्र हेरेर रणबिरले भने ‘मुझे मेरा अवार्ड मिल गया।’
Posted By: 24 News Presson: January 31, 2018
एजेन्सी । बलउिडमा वीग बी अर्थात अमिताभ बच्चने फिल्म ‘पद्मावत’ अभिनेता रणबिर सिंहलाई हस्त लिखित पत्र पठाएका छन्। ‘पद्मावत’ मा रणबिरको अभिनय देखेर प्रभावित भएर बच्चनले रणबिरलाई पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रलाई रणबिरले आफ्नो अवार्डको संज्ञा दिएका छन्। उनले पत्र पाउनुको खुशी ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘मुझे मेरा अवार्ड मिल गया।’ रणबिरले आधिकारिक ट्विटरमा पत्र र फूलको फोटो पोस्ट गरेका छन्। पद्मावतमा उनले गरेको अभिनयका लागि अमिताभ बच्चनले उक्त पत्र पठाएका हुन्।
फिल्म पद्मावतमा एन्टागोनिस्टका रुपमा स्थापित रणबिरले सुल्तान अलाउद्दिन खिलिजको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। पद्मिनीप्रतिको लगावका कारण उनले चित्तरोमा युद्ध गर्छन्।
रणबिरले यसअघि पनि सन् २०१५ मा फिल्म ‘बाजिराव मस्तानी’मा गरेको अभिनयका लागि पनि बच्चनबाट तारिफसहितको पत्र पाएका थिए। जसमा उनले पेशवा बाजिरावको भूमिका निभाएका थिए।
मनिषा कोइरालाको भित्री रहस्य ड्रग्स देखी डिभोर्ससम्म
Posted By: 24 News Presson: January 09, 2018
एजेन्सी । भारतीय अनलाईन दैनीक भास्करले मनिषा कोईरालाको फिल्मी करियर तल झर्नुमा ड्रग्स प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएको छ । केहि समय अघि दैनिक भास्करले नेपाली चेली काेइरालाकाे फिल्मी करियर डुब्नुमा ड्रग्स प्रमुख कारण रहेकाे दावि गरेकाे हाे ।
भारतीय चलचित्रमा एक समयकी चर्चित नायिका मनिषा कोइराला जो नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका स्व बिश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकी नातिनि हुन् । सन् १९७० मा नेपालमा जन्मिएकी मनिषा ४८ वर्षमा पुगिसकेकी छिन्। बलिउडमा उनले चलचित्र ‘सौदागर’बाट डेव्यु गरेकी थिइन् । उक्त चलचित्रमा मनिषाले दिलीप कुमार र राज कुमार जस्ता चर्चित कलाकारसँग काम गरेकी थिइन् । मनिषा अभिनित पहिलो चलचित्र हिट भए पछि उनको चर्चा बलिउडमा हुन थाल्यो ।
मनिषाले ‘धनवान’, ‘बम्बे’, ‘अकेले हम अकेले तुम’, ‘मन’, ‘लज्जा’ लगायतका कयौँ सुपरहिट चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन् । चलचित्रमा काम गर्दा गर्दै केही समय पछि उनलाई क्यान्सर भएको खुलासा भएको थियो । क्यान्सर जस्तो रोगलाई निको पारेर मनिषाले यही वर्ष ‘डियर माया’ नामक चलचित्रमा काम गरेकी थिइन् । कमब्याक चलचित्रको रूपमा हेरिएको डियर मायामा मनिषाको कामले प्रशंसा पाएको थियो । तर राम्रो समीक्षा पाएको ‘डियर माया’ले ब्यापार भने राम्रो गर्न सकेन् ।
भारतीय मिडिया अनुसार कयौँ सुपरहिट चलचित्रमा काम गरेकी मनिषाको करियर ड्रग्स सेवनले बिग्रिएको बताइएको छ । पहिलो चलचित्रबाट नाम र दाम कमाएकी मनिषाले आफ्नो स्टारडमलाई पछिल्लो चलचित्रमा देखाउन नसके पछि उनी तनावमा थिइन् ।
तनावको कारण नै ड्र्ग्स सुरु गरेको भारतीय मिडियाले लेखेको छ । ड्रग्सको कारण चलचित्र कम पाउन थाले पछि उनको स्वास्थ्य पनि बिग्रिएको जनाइएको छ ।
करियर डाउन भएसँगै उनले केही समय अघि नेपालका एक व्यवसायीसँग लगन गाँठो कसेकी थिइन् । तर उक्त विवाह दुई वर्ष सम्ममात्र रह्यो । डिभोर्स भएसँगै उनले बढी मात्रामा मध्यपान र ड्रग्सको सेवन गरेको बलिउड भास्करले लेखेको छ । यसै कारण पनि उनलाई केही राम्रो प्रोजेक्टबाट निकालि दिएको जनाएको छ । सन् २०१२मा डिभोर्स दिएकी मनिषालाई सोही वर्ष क्यान्सर भएको थाहा भएको थियो । क्यान्सर उपचारको लागी उनले चार वर्ष लगाएकी थिइन् ।
उनै काेर्इराला अहिले पुनः बलिउडमा फर्कँदै छिन् । सन् २०१८ मा उनले सञ्चयदत्तकाे कायाेपिक चलचित्रमा काम गर्दैछिन् ।
उनलार्इ भारतिय मिडियाले भारतिय कलाकार नाना पाटेकर देखि जैकी श्राफसँगकाे अफेयरसँग जाेडेर पनि विवादमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।